Uyibeka njani iXiaomi Mi Band 3 ngeSpanish | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ezinye izixhobo, Ukukopela kwe-Android, Tutorials, Xiaomi
Akukho mveliso ifunyenweyo Kwaye ububudenge ukubona ukuba ifumaneka kuphela ngolwimi lwesiTshayina, ubuncinci ngokusesikweni kwaye ide ikhutshwe i-firmware yamazwe aphesheya ngenyanga kaSeptemba walo nyaka, ungakhathazeki ukusukela apha kwi-Androidsis ngendlela elula Siza kukufundisa indlela yokubeka iXiaomi Mi Band 3 ngeSpanish.
Kwividiyo endikushiya ungene kuyo kule post, ndiza kukubonisa indlela elula yokubeka iXiaomi Mi Band 3 ngeSpanish ukuze sonwabe kwaye siqonde yonke into esebenzayo le bracelet yomntu odumileyo. Uphawu lwaseTshayina lusinika. Ukongeza ekucaciseni yonke inkqubo yokulandela inyathelo ngenyathelo, uya kuba nakho ukufumana isicelo esifunekayo beka iXiaomi Mi Band 3 ngeSpanish kwimizuzu embalwa.
Kwividiyo endikushiye kuyo ekuqaleni kwesi sithuba ndicacisa inkqubo yokulandela inyathelo ngenyathelo, inkqubo enqunyelwe ekulandeleni la manyathelo ndikushiye apha ngezantsi:
Siya kwisicelo esisemthethweni seMi Fit nakukhetho Iprofayile yam / iMi Band 3 siye emazantsi kwesikrini, emazantsi ayo yonke into kwaye siyikhupha kwiXiaomi Mi Band 3.
Sikhuphela le APK eguqulweyo yohlobo lwamva nje lweXiaomi Mi Fit.
Ukusuka useto lwe-Android yethu senza ukuba ukhetho lube nakho faka iiapps kwimithombo engaziwayo.
Sifaka i-APK ekhutshelwe ngaphambili kwaye singena kwiakhawunti yethu yeXiaomi.
Sifuna kwaye sidibanisa iXiaomi Mi Band 3.
Oku kuyakwanela ukuze, nje ukuba iXiaomi Mi Band 3 idityaniswe, oku Fumana uhlaziyo lwe-firmware oluya kubeka iXiaomi Mi Band 3 ngeSpanish. Oku sele kwenzekile xa uXiaomi wakhupha i-firmware ukusombulula ingxaki Mi Band 2 ayinxibelelanisi, ke ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba sihlaziywe ukuyibeka ngeSpanish.
Ngelixa inkqubo yokukhuphela kunye nokufaka i-firmware entsha ngeSpanish ye-Mi Band 3 ihlala, ayitsho isongo kufuneka sihlale sisondele kwi-smartphone apho ufake khona usetyenziso lwe-Mi Fit kwaye inxulunyaniswe nayo.
Le yinkqubo yokuhlaziya i-firmware engathathi mizuzu mibini ukuyigqiba ngokupheleleyo. Inkqubo, ethi ekugqibeleni kwaye ngokungathi ngomlingo iXiaomi Mi Band 3 iya kusibeka eSpanish.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Uyibeka njani iXiaomi Mi Band 3 ngeSpanish
Enkosi kakhulu, ndiyilindele ukuba ifike, bendicinga ukuyisebenzisa ngesiTshayina kodwa ndiyabona ukuba ayonakalanga. Ndizakuzama ukuyenza. Enkosi ngegalelo
Andihlaziywanga nokuba ngamanyathelo evidiyo yakho okanye usetyenziso olusemthethweni, ndenza ntoni?
UJosep Valls sitsho
Inqaku lakho libonakala liluncedo kum, kodwa ndinengxaki; Xa ndizama ukudibanisa isacholo kwiselfowuni, sakuba siyifumene, indicela ukuba ndifake inani lesongo (elinamanani ama-4) ndize ndibambeke kuba andinayo le nombolo:
Ungandixelela ukuba ndingayenza njani?
Ndilindele iindaba zakho.
Phendula uJosep Valls
Mva kwemini ingxaki yam yile ilandelayo ngobu busuku ibluetooth yam ihambile xa bendilele ndizamile ukuyibeka kodwa andazi ukuba yintoni endiyikhumbulayo ukuba ibekwe ngesiNgesi ... inesisombululo
UOscar ortiz sitsho
Ubusuku obuhle, ndilandele amanyathelo akho kodwa xa ndivula isicelo osithumela kuso kwikhonkco, ayindivumeli ukuba ndingene, ndizamile u-Facebook, uGoogle kunye neakhawunti yam, kodwa ndifumana impazamo kuzo zonke. Bangaba nobubele kakhulu ukuba ungandinceda, kuba ndinenguqulo yamaTshayina ebhendi yam endiyithengele umama kwaye akakwazi ukuyisebenzisa ngesiTshayina.
Phendula uOscar Ortiz
IVivo Z1i: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina